Wepamusoro 3 Mahombekombe muJamaica | Kufamba Nhau
Mahombekombe uye Resorts | | Jamaika, Beaches
Isu tinogara tichingotaura nezve rimwe chete gungwa kunyanya, kuti tikwanise kuiongorora uye nezvakatipoteredza zvakadzama. Asi chokwadi ndechekuti zvakare zvakanaka kugona kuita chinzvimbo chemabhichi akanakisa munzvimbo yakakosha seJamaica, chivako chereggae, ino nhasi inzvimbo yakakwana yekunakidzwa nemahombekombe ayo.
MuJamaica kune mahombekombe mazhinji anoyevedza, sezvo chiri chitsuwa chine mamiriro ekunze akanaka kuti ugone kunakidzwa kazhinji kwegore. Asi kune mamwe anomira zvakanyanya uye ave akanyanya kufarirwa. Kana iwe uchizoshanyira Jamaica pazororo rako rinotevera, aya ndiwo mahombekombe matatu atinokurudzira.
2 Bay yePuerto Antonio
3 Dunn's Rwizi Gungwa
Iri gungwa nderimwe ratakambokuudza nezvazvo kare, kubvira iyo Negril ndeimwe yevakakurumbira uye vane mukurumbira. Ndiyo yakanakisa muJamaica yese, uye inoonekwa seimwe yepamusoro pasirese, saka inzvimbo inowanzo kuve nevashanyi vakawanda. Muma60 yaive hippie yekuenda, uye nhasi zvinokwanisika kuita nudism mairi. Iine makiromita gumi nemana emichindwe uye yakasikwa uye nharaunda yemusango. Pedyo pane mabhawa, mahotera uye zvitoro zvidiki zvemuno, sezvo iri imwe yeanonyanya kushanya.
Bay yePuerto Antonio
Iri gungwa rinodyiswa nemakungwa echisikigo, uye mariri zvinokwanisika kushamba mukristaro yakajeka uye yakadzikama mvura. Ino inzvimbo huru yekuenda kayaking uye rafting munzvimbo yeBlue Lagoon. Nekuda kwemvura yaro yakadzikama, inzvimbo yakanaka kumhuri.
Dunn's Rwizi Gungwa
Rwizi rweDunn runosangana neCaribbean pamhenderekedzo iyi nemvura yakajeka. Kufamba-famba pasi pemapopoma ndechimwe chezviitiko zvakanakisa zvinogona kuitwa pamhenderekedzo iyi, pamusoro pekufungisisa nzvimbo inoyevedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Beaches » Pamusoro 3 Mahombekombe muJamaica
Ungashanyira sei iyo Iguazu Falls pasina mapoka
Woolacombe Beach, yeUK gungwa